टिकटकमा महिनामा लाखौ कमाउने कलाकारहरु [नाम सहित] – Khabar Patrika Np
टिकटकमा महिनामा लाखौ कमाउने कलाकारहरु [नाम सहित]
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २७, २०७८ समय: ९:५१:५८
काठमान्डौ -केहि हप्ता देखि गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा र मोडल गरिमा शर्माको एक भिडियो क्लिपले बजार तातिरहेको थियो ।भिडियो थियो टिकटकमा खेलिएको गेममा बोलिएका छा’डा र तु’च्छ शब्द ।
दुर्गेशले गरिमालाइ आफ्नो एक्स गल फ्रेन्ड भएको र गरिमासंग भेट भएको अबस्थामा कुराकानी गर्न गरिमालाइ टास्क दिए । गरिमा ले शुरुमा आफुलाई अप्ठेरो लागेको र त्यस्तो गर्न नसक्ने जस्तो कुरा सुनाइन दुर्गेशले फेरी जोड बल गरे अन्तत गरिमा राजि भइन ।
अनि शुरु भो अहिले भनिएको गरिमा दुर्गेश काण्ड ।भिडियो मा दुर्गेशलाई दाई भनिरहेकी गरिमा अब ‘पूर्वप्रेमी’ का रुपमा सोचेर तिमी भन्न थाल्छिन् । दुर्गेश चाहिँ ठाडै ‘तँ’ भन्छन् र तु’च्छ शब्दहरु प्रयोग गर्छन् ।के खान बोल्न आको तँ ? म सञ्चो भए पनि बिसञ्चो भए पनि तँलाई के मतलब ?
गरिमा जवाफ दिन्छिन केही छैन । आखिर छोडेर गइहाल्यौ क्यारे । कस्ती छ त तिम्री मायालू ? माया गर्थे ?दुर्गेश फेरी थ’र्काउछन्- के सोच्छेस आफूले आफूलाई ? संसारमा मभन्दा राम्री कोही छैन जस्तो लाग्छ तँलाई ? मलाई तँजस्तो रुपको राम्री होइन मनको राम्री चाहिएको हो ।
तँमा यति घ’मण्ड छ नि, तँजस्ती घमण्डीलाई कसले लैजादो रहेछ हेर्छु ।गरिमा फेरी भन्छिन म घ’मण्डी भएर तिमीजस्तो मान्छेसँग छु’ट्नुपरो, त्यसमा मलाई एकदम खुशी छ हेर दुर्गेश । तिमीसँग बसेको भए मेरो जिन्दगी ब’र्बाद हुन्थ्यो ।दुर्गेश अझ उ’ग्र हुदै भन्छन – मसँग छु’ट्टिसकेपछि (कतिपयले यसलाई ‘सु’तिसकेपछि’ भनेर बुझेका छन्) तेरो ६ जनासँग छु’ट्टिसक्यो, मैले देखिराछु ।
तेरो टोलको भाइ मेरो साथी हो । कहिले कोसँग चलिराको छ, कहिले कोसँग चलिराको छ । कति दिन यसरी हिँ’ड्छेस तँ ? हेर्, भविष्य लामो छ । जिन्दगी लामो छ । जिन्दगी का’ट्नुछ भने एउटा मात्रै अंगाल् । अरुको जिन्दगीमाथि खे’लवाड गर्दै दाईं हाल्दै नहिँड् ।यस्तै हुदै उनीहरुको सम्बाद अगाडी बढ्छ ।
यहि सम्बादलाइ लिएर एपिवानबाट प्रसारण हुने फिल्मी कार्यक्रम रजतपटमा रिपोर्ट बजेपछी सेलाउन लागेको गरिमा दुर्गेश काण्ड फेरी तातेको छ । गरिमा कानुनि उपचार खोज्न सम्मको तयारीमा छिन भने कार्यक्रम प्रस्तोता प्रकाश सुबेदी आफुले ठिक गरेको भन्दै अ’ड्डी कसिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय संसारभर लोकप्रिय बनेको टिकटक मनोराजनको लागि भन्दा पनि डलर क’माउनको लागि बढी प्रयोग हुन् थालेपछि यसको गलत प्रयोग बढिरहेको छ । टिकटकमा फलोअर्स बढाउने देखि लाइभ गेमसम्म अहिले टिकटकमा गरिने ह’र्कत हुन् ।
कतिपय टिकटकर आफ्नो लाइभमा आए अलोअर्स ब’ढाई दिने भन्दै डलर गिफ्ट बटुल्न तल्लिन छन् भने कति पय कलाकार गाएक गायिक तथा मोडलहरु लाइभ गेमको भ्र’म छर्दै अन्तत कमाउने ध’न्दामा लाग्दा आफुहरु चि’प्लिरहेका छन । त्यसैको नमुना हो दुर्गेश गरिमा काण्ड ।
टिकटकमा गेम खेलाउने सेलिब्रेटीमा दुर्गेश थापा , रमेशराज भट्टराई , पशुपति शर्मा ,टंक तिमल्सिना ,राजु ढकाल , रचना रिमाल , समिक्षा अधिकारी , मेलिना मैनाली ,एलिना चौहान , उषा उप्रेती लगाएत पर्छन ।उनीहरु टाइम सेडुलनै बनाएर एक अर्काको लाइभमा गेम खेल्ने गर्छन ।
टिकटकमा खेलिने लाइभ गएमा दर्शकले पठाएको गिफ्ट नै टिकटकरको आम्दानीको श्रोत हो ।गिफ्ट पठाउनको लागि डलर कार्ड चाहिन्छ ।डलर कार्ड भएका दर्शकले रोज लागएतका गिफ्टमा क्लिक गरेपछि निश्चित रकम उनीहरुको एकाउन्ट बाट का’टिएर गेम खेलाउनेको खातामा जम्मा हुन्छ ।यसरि गेम खेलाउनेले मासिक १५ देखि २० लाख सम्म आम्दानि गर्न सक्छन ।